Salaadda Santa Muerte ee shaqada. ? Wuxuu shaqeeyaa 24 saacadood!
2 Akhriska Min
U soo ducee Santa Muerte shaqada Waa mid aad u awood badan.
Waxay u shaqaysaa si aad u badan haddii aad raadineyso shaqo sida haddii waxa aad u baahan tahay ay tahay in lagu xalliyo dhibaatooyinka qaarkood ee lagu soo bandhigi doono goobtaada shaqada.
Tamarta taban ee aan dareemeyno, mararka qaarkood, goobteenna shaqada waa kuwo shar leh oo saameyn ku yeelan kara asxaabteena, madaxdayada iyo nafteenna si toos ah ama si dadban.
1 U soo ducee Santa Muerte shaqada
1.1 Dhimashada Quduuska ahi ma xoog baa?
1.2 Ma halis baa in la yiraahdo ducadan?
1.3 Goormaan u tukan karaa tukashada salaadda cibaadada ee shaqada?
Dhimashadayda qaaliga ah ee aan jeclahay oo la jecel yahay Geerida, waxaan kaa baryayaa inaad ereyadan ka hesho maxaa yeelay waxaan u baahanahay caawinaaddaada.
Shaqada waxaan ku arkaa dhibaatooyin aniga igu kalifaya shaki iigaga jiro.
Waxaan ugaarsaday gorgor wax cunaya oo masayrka raba inay i hoos arkaan.
Waxaan marayaa waqti xun oo aan doonayo inaan beddelo, waxaan u baahanahay shaqo aan ka jirin masayr, halkaas oo xirfadaha aan lagu aqoonsan yahay oo aan u muuqan karo mid ka sii fiican. Si aan u siiyo qoyskeyga raaxada ay u baahan yihiin.
Waxaan kaa codsanayaa inaad shaqadayda sii haysatid, hadduuna sidaas noqon kari waayo. Ii caawi sidii aan u fiicnaan lahaa. Waxaan weydiisanayaa maalinta ay tahay inaan tago wareysi.
Waxaan rabaa in aan gaaro himilooyinkeyga xirfadleyda si aan u dareemo buux.
Waxaan rabaa shaqo wanaagsan, mushahar fiican, in hadafkeyga xirfadeed uusan xad laheyn.
Waxaan doonayaa inaan istaago si aan uga fiicnaado. Taasi waa sababta aan kuugu imid, wanaagaaga iyo awoodaadu waa infinito inaan ku daayo dhibaatooyinkayga gacmahaaga. Mahadsanid, waan ku mahadsanyahay si aan xad lahayn, waxaan ahay aaminkaaga aaminka ah.
Jumladdan waxaa la dabaqayaa wakhtigaas markii aan u tagno wareysi shaqo, marka aan ku dhow nahay in aan codsanno shaqada aan mar walba dooneynay, in aan weydiinno taasi waxay naga caawinaysaa inaan helno dallacsiin ama kordhinno mushaharkeenna, haddii aad kujirto wakhti adag oo goobta shaqada ah wehelkaaga, maamule, macmiil ama shaqaale.
Sikastaba, salaaddan ayaa kaa caawin doonta inaad wax kasta oo ku lug leh goobta shaqada oo dhan.
Dhimashada Quduuska ahi ma xoog baa?
Waxaa si weyn loogu ixtiraamayay sanado badan, gaar ahaan dadka reer Mexico.
Rumaystayaashu way sii kordhayaan tanina waxay muujinaysaa oo keliya awoodda dhimashada Quduuska ah.
Waxaa jira kuwa tixgeliya inuu yahay ruux shar leh laakiin tani gabi ahaanba waa saldhig la'aan markii aan aragno mucjisooyinka iyo caawimaadda uu Quduuskan siiyay dhammaan kuwa u yimaada iyada oo raadinaya jihayn iyo caawin.
Ma halis baa in la yiraahdo ducadan?
Salaadaha naftooda iyagu khatar ma aha.
Si kastaba ha noqotee, way wanaagsan tahay in lagu qabto iyaga mas'uuliyad buuxda maxaa yeelay marar badan waxaan weydiisannaa wax aan annaga nagu habboonayn midkood ahaan, saaxiib ama xubin qoyska ka mid ah.
Tukashadu waa arin xasaasi ah maxaa yeelay waxaan galaynaa boqolkiiba boqol ruux oo nolosheena ah taas oo ah inaan ogaano sida loo dhaqaaqo maxaa yeelay taban ayaa ku jirta raadinta daciifnimada iimaanka.
Goormaan u tukan karaa tukashada salaadda cibaadada ee shaqada?
Waqti kasta, salaadani waxay noqoneysaa hubka qarsoon marwalba meel kastoo aan joogno.
Kuwo badan ayaa kugula taliya in la sameeyo meel allabari ama loo diyaariyo jawiga salaadda ka hor taasina waxay naga caawin kartaa inaan diirada saarno waxa aan qabanno.
Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah inaan ogaano haddii aanaan haysan sidan oo kale, salaadda inay tahay mid wax ku ool ah oo awood leh maxaa yeelay waxaa lagu sameeyaa aaminaad inay tahay shuruudda keliya ee ay tahay inaan ku fulinno dariiqo qasab ah.
Salaad adag oo xoog badan si Santa Muerte jacayl aan macquul aheyn
4 duco oo loogu talagalay Saint Cyprian xoog badan